Voasoloky hatramin’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena : mianadahy mpanao tetikasa , voasambotra noho ny vola 200 tapitrisa Ar | NewsMada
Voasoloky hatramin’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena : mianadahy mpanao tetikasa , voasambotra noho ny vola 200 tapitrisa Ar
Tsy kely lalana ny ratsy ! Mpianadahy no voasambotry ny polisy miasa ao amin’ny « service central de la lutte contre les faux, fraudes et contrefaçons » etsy Anosy, ny alarobia 3 aogositra lasa teo tany Fianarantsoa noho ny resaka fisolokiana avo lenta.
Tetikasa lehibe iray eto an-drenivohitra, vatsian’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena no voasolokin’izy ireo. Araka ny fanazavana avy amin’ny polisy, manokatra « compte » amin’ny banky roa samy hafa izy ireo. Sokafany amin’ny anaran’olona hafa izany, ary arotsany ao ilay vola avy any amin’ny mpamatsy vola ka alainy indray andro aorian’izay. Mandefa “ordre de virement” hosoka izy ireo amin’ny anaran’ilay orinasa ary izy mianadahy ihany no maka ilay vola avy eo.
Tsikaritry ny tompon’orinasa ireo vola 200.000.000 Ar banga tao amin’ny kaonty ary nametraka fitoriana teny anivon’ny polisy ekonomika avy hatrany izy.
Natao ny fanaraha-maso sy ny fikarohana rehetra. Hita fa miafina ao anatina e-mail an’olon-kafa maromaro na amin’ny e-mail orinasa hafa izy ireo rehefa manao fitsirihana kaonty amin’ny banky. Tamin’ny alalan’ny fijerena ireo “caméra de surveillance” tao amin’ny banky sy ny fanadihadiana ny olona noresahany nandritra ny nakan’ilay vehivavy ny vola tao amin’ny banky no nahafahana nisambotra ity farany tany Sahambavy ambanivohitra Fianarantsoa, ny alarobia lasa teo.
Ny antsasak’ilay vola no efa azon’ireo mpisoloky. Ny antsasany kosa tafajanona taorian’ny nahafantaran’ny tomponandraikitry ny orinasa ilay tranga. Tompon’andraikitra ara-bola tao amin’ilay tetikasa taloha fa nametra-pialana herinandro talohan’ny nahasamborana azy ilay lehilahy mpisoloky. Manentana hatrany ireo olona rehetra indrindra fa ny banky mba ho mailo ny Commissaire Principal de Police Ramampiandry Nicolas, lehiben’ny « central de la lutte contre les faux, fraudes et contrefaçons ». Atolotra ny fampanoavana anio ireo mianadahy voasambotra ireo.